Famoronana sy fandraisam-peo Isos avy amin'ny terminal ao amin'ny Archlinux | Avy amin'ny Linux
Famoronana sy firaketana ny isos avy amin'ny terminal any Archlinux
Manohy amin'ny terminal izahay ... Ny iray amin'ireo zavatra ataoko matetika dia ny mamorona backups amin'ireo rakitra ananako ao an-trano. Midika izany fa alaina avy ao amin'ny masinina ny fampahalalana mba hananana toerana bebe kokoa amin'ny kapila mafy.
Misy fitaovana tena tsara toy ny K3B izay nahazo laza tsara tao amin'ny vondron'olona mpampiasa GNU / Linux noho ny fahamoran'ny mpampiasa azy. Manokana indrindra, tsy nampiasa K3B nandritra ny 5 taona mahery aho ary tena zara raha nampiasa rindrambaiko sary hamoronana ireo fisie ireo.
Ireo fitaovana izay ampiasako matetika dia mitovy amin'ny ampiasain'i K3B nefa tsy asiana ny interface graphique izay ampiasain'io fitaovana io ary avy hatrany amin'ny terminal.
Ny zavatra voalohany tokony ho hitantsika dia raha manana fitaovana ilaina napetraka isika .. izay anaovantsika izany
Raha ho ahy ny vokatra dia efa napetraka ilay fonosana fa raha tsy izany dia mirosoa hametahana azy sudo pacman -S cdrkit. Io dia hametraka izay ilaina hanatanterahana ilay asa. Ity manaraka ity dia ny fametrahana lahatahiry izay ananantsika ireo rakitra izay tiantsika hotehirizina.
Ho ohatra iray dia namorona lahatahiry ao an-tranoko miaraka amin'ilay ohatra misy anarana aho ary ao anatiny lahatahiry hafa izay hametrahanay ireo rakitra tianay horaketina (DVD misy info manodidina ny 4 Gb).
Raha vantany vao nandidy ireo rakitra ao anatin'ny lahatahiry haleha izahay dia mamorona ny iso miaraka amin'ireto manaraka ireto:
Aorian'ny fanerena hiditra dia hanomboka ny famoronana iso, izay maharitra fotoana fohy vao vita. Tsy maintsy miandry isika mandra-pahatapitry ny fiafarany.
Raha vantany vao vita io dia afaka manamarina ny haben'ny iso vao noforonina isika miaraka amin'ny baiko du -hlsc Archivos.iso, izay hanome antsika ny haben'ny iso noforonina
Ny zavatra manaraka dia ny firaketana ny iso. tsy maintsy tadidintsika fa ny anaran'ny fitaovana fandraisam-peo toa ny cd's amin'ny ankapobeny dia manondro azy / dev / sr0 saingy mety ho hafa arakaraka ny tranga izany. Amin'ny tranga ankapobeny, ny baiko hamonjy ny iso ananantsika dia:
Raha vantany vao vita ny fizotrany, ny sisa dia esorinao ilay fitaovana mamoaka ary hananantsika ilay fampahalalana amin'ny fitaovana azo esorina ...
Manantena aho fa ilaina izany ary manantena aho fa hanome hevitra 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Famoronana sy firaketana ny isos avy amin'ny terminal any Archlinux
Mhh, tadidiko fa nampianarinao ahy izany, taloha xd
Avy any Capital Federal (Arzantina) ve ianao?
Tsy ahaha, Espana, faritanin'i barcelona 😛
Tsy avy any venezuela aho
Mazava. Safidy tsara io
an'izay nahafaty olona dia hoy izy:
Fampianarana tena tsara, andao apetraka amin'ny fampiharana 😉
Mamaly an'i Slayer
Faly aho fa ilaina ho anao izany. Betsaka ny fitaovana azo ampiasaina sy ilaina ao amin'ilay rafitra
Nampidirina amin'ny Favorites!
Hanohy hametraka ireo zavatra mifandraika amin'ny fampiasako azy ao anaty masinina aho fa heveriko fa tena ilaina tokoa
Ity karazana lahatsoratra ity mety tsy ny fanehoan-kevitra be indrindra fa tena sarobidy izy ireo, arahabaina, tohizo.
azo antoka .. fa ny hevitra dia misy mahita fa mahasoa azy .. raha izany dia ho tanteraka ny tanjon'ity lahatsoratra ity!
Nanontany tena foana aho, ho antsika izay manana Gnome, xface, kde, sns sns sns ... inona no ilain'ny karazan'ity paositra fampiarana terminal ity ho antsika.
Tsy hampahatezitra ny mpanoratra / mpanoratra, fa ho ahy manokana, izay rehetra misy ifandraisany amin'ny fandoroana CD / DVD dia ampiasaiko mivantana programa GUI hanamorana azy.
Miala tsiny raha manafintohina na mitsikera aho, fantatro fa ny terminal no fitaovana matanjaka sy manan-danja indrindra ananantsika ao amin'ny Linux, misy fotsiny ny fotoana namakiako zavatra avy tao amin'ny terminal izay fantatro fa amin'ny tsindry 2 na 3 dia ho voavaha izy ireo.
Alohan'ny hamaranana ny fitifirany ahy ho an'ny firaketana, dia mpampiasa farany ihany no resahiko satria fantatro fa maro ny mpizara na izy ireo no mitazona azy ireo tsy misy asa sary heveriko fa
Ny zava-mitranga dia rehefa fantatrao ny baiko dia haingana kokoa ny manao azy toy izao noho ny manome tsindry 2 na 3 (izay raha ny tena izy dia maro kokoa hatrany), dia mitazona ny fahadiovan'ny rafitrao ianao ary kely kokoa ny fanjifana ny enti-manana.
1.- f12 hanokatra yakuake
2.- soraty "wodim -v -dao -speed = 4 dev = / dev / sr0 File.iso" -> ampidiro
1.- tsindrio ny menio
2.- tsindrio ireo application
3.- tsindrio ny fitaovana
4.- kitiho ny X malefaka
5.- tsindrio ny fisokafana
6.- tsindrio raha hizaha ny fampirimana misy ilay rakitra ary safidio izany -> Ampidiro
7.- tsindrio ny firaketana
Raha manana ny rindranasao amin'ny ankafizinao ianao dia mamonjy tsindry 3 nefa na dia izany aza dia azo antoka kokoa fa miadana kokoa ary ny fisian'ny fampiharana rehetra ao anaty tianao dia safidy tsy mandeha.
Mety marina ny anao ... Hiezaka ny hampiasa bebe kokoa ny console aho satria tsy dia ampiasaiko amin'ny lahasa amin'ity karazana ity lol ... tsara ny manandrana ... Grax for the data
Hitako mampiasa KDE ianao, noho izany safidy tena tsara dia Krunner, manana hery anaty tsy mampino.
Eny, raha ny tena marina dia miresaka momba an'ity fampiharana tena tsara ity izahay: https://blog.desdelinux.net/tag/krunner/
Misaotra betsaka anao amin'ny tendrony. Ankoatr'izay, tiako ny mampiasa ny console ho an'ity karazana tranga ity izay tsy zakako ny mandany fotoana betsaka kokoa noho ny nandrasana.
Lahatsoratra tsara Izy io koa dia manana laza xorriso tsara, na dia mbola tsy nanandrana azy aza aho.
Tena tsara, ny zavatra tsara momba ny console dia azo atao na dia mihidy aza ny masonao (tsy atoro anao)
Tena tsara, tiako koa fa misy andohalambo maromaro arch
ary hisy bebe kokoa araka izay tratra
Adept-Linx dia hoy izy:
Hitako fa manonona xorriso izy ireo, saingy fantatr'izy ireo ny fahaizany mamehy rakitra (compression mangarahara).
Jereo ohatra iray:
Ny famatrarana dia tsara, ary rehefa nitaingina iso tamin'ny fuseiso na mount dia afaka mamoha ny fisie toa ny ao anaty fampirimana tsy misy alalana hamaky.
Andramo fa tsara.
Mamaly an'i Adepto-Linx
Fluxreader: Ny mpisolo toerana farany ahy amin'ny Google Reader
Afaka namorona smartwatch manokana i Microsoft